🥇 ▷ Sida loo arko La Internacional 2019 - Qulqulka, saacadaha iyo kooxaha ✅
Sida loo arko La Internacional 2019 – Qulqulka, saacadaha iyo kooxaha
Dhacdadii ugu weyneyd Dota 2, La Internacional, ayaa timid. Siddeed iyo toban koox ayaa u dagaallami doonta abaalmarinta TI9 iyo abaalmarinta isboortiga ugu sareysa.
Caalamiga ah sanadkan Tani waxay ka dhici doontaa markii ugu horreysay Shiinaha. Siddeed iyo toban koox ayaa u dagaallami doonta abaalmarin soo koraysa, oo maanta ah lambarka diiwaangelintu wuxuu dhaafay 32.7 milyan oo doolar. sharaftiisna waxaa loogu sharfay IT9 horyaal.
Labadan iyo toban koox ayaa soo idlaaday iyagoo ku daray dhibco ku jirta Dota 2 tartamada waa weyn ee 2018-2019. Iyadoo lix ka mid ah ay tahay inay wajahaan qiimeynno adag oo heer gobol ah.
Hoos waxaad ka heli doontaa dhammaan macluumaadka aad ugu baahan tahay inaad gasho tartanka. Waxaa ku jira durdurro toos ah oo kala duwan, qaabab rasmi ah, jadwallo, kooxo iyo inbadan.
Xogta Guud ee Caalamiga ah 2019
Goobta: Mercedes-Benz Arena – Shanghai, China
Taariikhda: 1424 Ogosto 2019
Sanduuqa abaalmarinta: $ 32,714,615 (iyo koror)
Wadarta Kooxda: 18
Sideed u aragtaa La Internacional 2019?
Barnaamijka caalamiga ah ee ‘2019 International’ wuxuu hawada toos uga sii deyn doonaa dhammaan kanaalka Dota 2 ee IT-ga, oo aan hoos kugu soo darnay si aad uugu habboon tahay. Sida caadiga ah, warbaahin ku qoran luqado kale ayaa laga heli karaa Twitch.
Mainstream Dota 2 IT
Qulqulka cusub ee Dota 2 IT cusub
Dota 2 IT Stream 2
Dota 2 IT Stream 3
Dota 2 IT Stream 4
Dota 2 IT Stream 5
Kalandarka caalamiga ah 2019 iyo dhibcaha
Munaasabadda ayaa loo qaybiyay laba marxaladood, marxaladda kooxda iyo dhacdada ugu weyn. Wareega kooxeedyada waxaa la ciyaarayaa laga bilaabo Ogosto 14-17 iyo kulanka ugu weyn waxaa la ciyaarayaa laga bilaabo Ogosto 1924.
Natiijooyinka marxaladda kooxda